ဂိမ်းကစားခြင်းမှ“ အတင်းအဓမ္မရှောင်ကြဉ်ခြင်း” သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသို့ ဦး တည်သလော 2018ပြီလ 2018 ခုနှစ် Fortnite ၏ဆာဗာများပျက်ဆီးမှုမှထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်တွင်အပေါက်
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဂိမ်းကစားခဲကနေ "abstinence အတင်းအဓမ္မ" ပါသလား? Fortnite ရဲ့ဆာဗာများ (2018) ၏ဧပြီလ 2018 ပျက်ကျမှုကနေဝိပဿနာ
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2018 စက်တင်ဘာ 11: 1-2 ။ Doi: 10.1556 / 2006.7.2018.78 ။
ကက်စထရို-Calvo J ကို1, Ballester-Arnal R ကို2, Potenza MN3, ရှငျဘုရငျ DL4, Billieux J ကို5.
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြီလတွင်လူကြိုက်များသော“ Fortnite” ဗီဒီယိုဂိမ်း၏ဆာဗာများသည် ၂၄ နာရီပျက်သွားသည်။ ဤကာလအတွင်း၊ Pornhub (လူကြိုက်များသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှာဖွေခဲ့သည်။ (က) Pornhub ကိုအသုံးပြုသည့်ဂိမ်းကစားသူများ၏ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၀% တိုးလာပြီး (ခ)“ Fortnite” ဟူသောဝေါဟာရကို သုံး၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်းတိုးပွားလာသည် 2018% အားဖြင့်။ ဤစာတွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအတင်းအကျပ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကာလအတွင်းလျော်ကြေးပေးခြင်းအပြုအမူအတွက်အသုံးချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍“ ဆုတ်ခွာခြင်း” ၏တရားဝင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုအခြေအနေတွင်ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးထားသည်။ ဂိမ်း။
keywords: ဂိမ်းကစားခြင်း, Fortnite, ဆုတ်ခွာ, လျော်ကြေးအပြုအမူတွေ, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း
ဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်ကြသေးအနည်းငယ်သာသူတို့ရဲ့ထပ်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဧပြီလ 11, 2018 ဗီဒီယိုဂိမ်းဆာဗာတွင် Fortnite: တိုက်ပွဲ Royale ၂၄ နာရီပျက်သွားပြီး“ အတင်းအကျပ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း” အပြုအမူများကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများအတွက်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Pornhub သည်နောက်ပိုင်းတွင်အွန်လိုင်းကစားသူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောကိန်းဂဏန်းများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် (Pornhub, 2018).
Pornhub "ဆာဗာများချခဲ့ကြသည်အခါ, Pornhub ကိုရယူသုံး (ဂူးဂဲလ် analytics ပေးဆှဖှေဲ့ data တွေကိုသုံးပြီးဖော်ထုတ်) ဂိမ်းကစားများ၏ရာခိုင်နှုန်း 10% တိုးပွားလာကြောင်းအစီရင်ခံနှင့်ဝေါဟာရကိုFortnite"ညစ်ညမ်းရှာဖွေမှုများကိုပိုမိုမကြာခဏလူများ 60% ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဤပုံစံများကို "အတင်းအဓမ္မ abstinence" ကာလမှကန့်သတ်ခဲ့သည့်အခါ baseline မှပြန်လာသော Fortnite'' s ကိုဆာဗာများ fixed ခဲ့ကြသည်။
ဤအစာရင်းဇယားပြန်ဆိုသောအခါအသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သူတို့ကဂိမ်းကစား၏ကာလကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေခြင်းငှါဘယ်လိုအလားအလာတန်ဖိုးရှိသောဂေဟစနစ်ဒေတာများကို "အတင်းအဓမ္မ abstinence ။ " ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက် "ရုပ်သိမ်းရေး" ၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံဖို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားအတွက်ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှုဖို့လျှောက်ထားသည့်အခါ "တဏှာ" (constructsStarcevic, 2016) ။ အထူး Fortnite ဂိမ်းကစား '' ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပုံစံများ (မကြာသေးခင်ကသုတေသနနှင့်အတူ resonateKaptsis, ဘုရင် Delfabbro, & Gradisar, 2016; ရှငျဘုရငျ, Kaptsis, Delfabbro, & Gradisar, 2016) အချို့သောဂိမ်းကစားသူများသည်လျော်ကြေးပေးသည့်နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် (“ အတင်းအကျပ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း” ကာလမှနှိုးဆွသောရောဂါများကဲ့သို့) စိတ်ပျက်ဖွယ်လက္ခဏာများကိုကိုင်တွယ်သည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုရှာခြင်းဖြစ်သည်။ ဖိုရမ်များရှိဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းစသည့်လှုပ်ရှားမှုများ YouTube ကို လျော်ကြေးအပြုအမူတွေအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, Pornhub ထုတ်ဝေသောစာရင်းဇယားသည်အခြားအစားထိုးအပြုအမူတွေကိုအကြံပြု: စားသုံးမှု Fortniteညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ -related ။ အမှန်မှာထိုအသုံးအနှုန်းနှင့်အတူ Pornhub ရှာဖွေနေသည့်အခါ Fortniteတစျသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ်ဝတ်ဆင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းများလုပ်ဆောင်ဘယ်မှာပျက်လုံးများတွေ့ပါစေခြင်းငှါ Fortnite ကစားနေစဉ်လိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်ဇာတ်ကောင်, စုံတွဲများ Fortniteဒါမှမဟုတ် Fortnite-related hentai (anime) ဗီဒီယိုများ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ (အတွင်းဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါနှစ်မျိုးလုံး၏မကြာသေးခင်ကထည့်သွင်းပေးထား2018) ICD-11 နောက်ထပ်သုတေသနပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအဆင့်ဆင့်မှာဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားအပြန်အလှန်နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် "အတင်းအဓမ္မ abstinence" သောအတိုင်းအတာအလားအလာပြဿနာအပြုအမူတွေ၏ switching မြှင့်တင်ရန်, ဤဖြစ်ပေါ်ရသောအားဖြင့်ယန္တယား, နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခိုင်လုံလိမ့်မည်။
လူအားလုံးတို့သည်စာရေးဆရာများညီတူညီမျှဖို့လှူဒါန်းခဲ့နှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏နောက်ဆုံး version ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
JC-C မှာ, RB-A, DLK နှငျ့ JB အကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခကြေညာ။ MNP Shire, INSYS, Rivermend ကျန်းမာရေး, Opiant / Lightlake ဟော်မုန်းများနှင့်ဂျက်ဇ်ဂီတဆေးဝါးများအတွက်တိုင်ပင်တော်မူပြီ Mohegan Sun ကကာစီနိုများနှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာမှ (ယေးလ်မှ) သုတေသနထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်; မူးယစ်ဆေးစွဲ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်, ဒါမှမဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောစစ်တမ်းများ, မေးလ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းညှိနှိုင်းပါဝင်ခဲ့ပြီ အဘို့တိုင်ပင်နှင့် / သို့မဟုတ် / စွဲလမ်းမမှန်-ထိန်းချုပ်မှု impulse နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များတွင်လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအကြံပေးတော်မူပြီ ပြဿနာတစ်ခုလောင်းကစားဝိုင်းန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွင်လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုပေးတော်မူပြီ သုတေသန-ရန်ပုံငွေအေဂျင်စီများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖျော်ဖြေမူပြီ ဂျာနယ်များနှင့်ဂျာနယ်ကဏ္ဍများကိုတည်းဖြတ်တော်မူပြီ ခမ်းနားကျည်, CME ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျနေရာများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပို့ချချက်အားပေးတော်မူပြီ; နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းကြီးထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
Kaptsis, D. , ဘုရင်, D. L. , Delfabbro, P. အိပ်ချ်, & Gradisar, အမ် (2016) ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်ထုတ်ယူခြင်းလက္ခဏာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 43, 58-66 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.11.006 Crossref, Medline, Google Scholar
ရှငျဘုရငျ, L. အယ်လ်, Kaptsis, D. , Delfabbro, P. အိပ်ချ်, & Gradisar, အမ် (2016) ။ အင်တာနက်ဂိမ်းများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းလော။ လွန်စွာများပြားစွာအွန်လိုင်းကစားခြင်းမှ ၈၄ နာရီတားမြစ်ခြင်းမှထုတ်ယူခြင်းလက္ခဏာများ။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 84, 62-488 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.020 Crossref, Google Scholar
Pornhub ။ (2018) ။ Fortnite server ကိုချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်။ ရယူရန်ဇွန်လ 19, 2018 မှ https://www.pornhub.com/insights/fortnite-server-outage (WebCite အားဖြင့်မော်ကွန်းတင်® at http://www.webcitation.org/70HyYIZV5). Google Scholar
Starcevic, V. (2016) ။ သည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ စွဲ, 111 (7), 1307-1308 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/add.13381 Crossref, Medline, Google Scholar
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2018) ။ ICD-11 သေဆုံးမှုနှင့်ရောဂါစာရင်းဇယားများအတွက်။ ရယူရန်ဇွန်လ 22, 2018 မှ https://icd.who.int/browse11/l-m/en Google Scholar